Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo gaaray Galmudug iyo Jubbaland | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo gaaray Galmudug iyo Jubbaland
Wafdi uu horkacayo wakiilka ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayaa maanta booqasho ku tagay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Kismaayo ee maamullada Galmudug iyo Jubbaland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wafdi uu hoggaaminayey Ergayga gaarka ah ee Xoghaya guud ee Qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambs James Swan, oo ay wehlinayeen xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka side wakiilka Midawga Afrika, wakiillo ka socday EU iyo IGAD ayaa soo gaaray xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta arrimaha amniga, doorashooyinka, bini-aadannimada iyo xaalada guud ee Galmudug. Kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa ay ka duuleen wafdiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb.
Xubnaha wafdiga ayaa gaaray Magaalada Kismaayo si ay ugala hadlaan Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam 'Madoobe' horumarka iyo tallaabooyinka xiga ee hirgelinta heshiiskii 27 May, gaar ahaan u diyaar garowga amniga doorashada, muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ugu yaraan boqolkiiba 30, iyo baahida loo qabo in la joogteeyo wadahadalka Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada inta lagu guda jiro howlaha doorashada.
Labada dhinac ayaa sidoo kale kawada hadlay caqabadaha bani-aadannimo iyo kuwa dhaqaale ee ka jira Jubaland, iyo in si degdeg ah loo dardargeliyo barnaamijka tallaalka COVAX. Qodobkaas oo gaar ku ahaa maamulka Jubbaland, iyadoo maamullada kale aan lagala hadlin tallaalka.
Xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii loo gaari lahaa heshiis dhammeystiran oo suurta galiya in dalku uu aado doorasho, iyadoo horay looga waayay tanaasul iyo heshiis dhab ah madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada.